विचार / बहस - के राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छ ?
पूर्वराजाको पोखरा र जनकपुर भ्रमणमा उपस्थित जनसागरको आशय ♥ सञ्चिता पौड्याल ♥ ‘राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र’ भन्दै हिन्दुराज्यको एजेण्डालाई सत्ताको लागि सौदावाजीको साधन बनाएका केही फ्याउरे नेता कुर्लिँदै हिँडेको आधारमा किमार्थ होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका भुक्तभोगी जनताले पिल्सिएको मानसिकताका आधारमा राजतन्त्रको औचित्यउपर चासो दिइरहेका छन् । राजतन्त्र फर्किने सम्भावनाबारे सत्ताको शिखरमा बहस सेलाएको छैन । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावनाभन्दा पनि हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको सम्भावना झन् जोडदार बनिरहेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
♥ इन्द्र रिजाल ♥ “मलाई मार्ने धम्कीको सुचना आएको छ”, गत बिहीबार (चैत ३०) प्रचण्डले भाषण गरे, “विप्लव मेरो हत्याको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ रे....।” प्रचण्डले यस्ता भाषण वर्षको कम्तिमा एकपटक सुनाउँदै आएका छन् । २०७० तिर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको बेला पनि उनले यस्तै उद्गार व्यक्त गरेका थिए । ब्लाकमेलिङ हो या सत्य, उनै जानुन् । वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विप्लव त्यो बेला वैद्य नेतृत्वकै माओवादीमा थिए भने एमाओवादीका अध्यक्ष रहेका प्रचण्ड बुलेटप्रुफ ज्याकेट लगाउन थालेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
बैकिङ, ब्याजदर, मुनाफा, व्यापारीका समस्या अनि आर्थिक समृद्दि काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत "सीईओ" एवं चार्टर्ड एकाउन्टेंट मनोज ज्ञवालीले व्याजदर घटाउनु पर्छ भन्दै नेताहरुको घरदैलो चार्हाने उधोगी –व्यापारी तथा नियामक निकाय प्रति चर्को आक्रोश पोखेका छन् । आज विहान आफ्नो फेसबुकवालमा लामो लेख लेख्दै सीईओ ज्ञवालीले व्याजदर घटाउनु पर्छ भन्दै आन्दोलन घोषणा गर्ने तथा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिने सबै उधोगी–व्यापारीलाई सत्तोसराप गदै तर्कपुर्ण जवाफ दिएका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
♥ बिक्रान्तकुमार श्रेष्ठ ‘सुवर्ण’ ♥ चन्द्रकान्त, दिपक र खड्क, तीनैजना मेरो नजरमा famous छन् , popular होइन । किनकी famous र popular मा धेरै फरक छ । popular भनेको गोविन्द के.सी हुन्, famous भनेका त गोविन्द के.सी. का बिरुद्ध अनसन बसालिएको गुण्डा ........ । राम्रो काम गरेर नाम कमाउने popular र नराम्रो काम गरेर नाम कमाउने famous बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा कुख्यात र विख्यात ......... । स्वतन्त्र मधेश मागेका छन् चन्द्रकान्त राउत उर्फ सीके राउतले । अमेरिकामा मासिक १५ लाखको जागिर छोडेर मधेश माग्न आए चन्द्रकान्त ।	थप पढ्नुहोस्
∴सम्पादकीय ‘ठूला’ पार्टीहरूमा तिलश्मी ढङ्गले तुच्छ कलह मच्चिरहनु अब नियमित आकस्मिकता भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसभित्र पन्पिरहेका कलहहरू सैद्धान्तिक द्वन्द्व होइनन्, न त जनतालाई सुविस्ता दिने होडवाजीका क्रममा पैदा भएका हुन् । यी पार्टीभित्र जनताले भोगेका कमी, कठिनाई र आवश्यकताबारे कहिल्यै एजेण्डाका रुपमा छलफल नै भएन । भ्रष्टाचारबाट मुलुकलाई मुक्त राख्न पार्टीहरूमा शुद्धीकरणको लागि निर्ममतापूर्वक देशब्यापी अभियान चलाउनुपर्नेतर्फ कहिल्यै सोचिएन ।	थप पढ्नुहोस्
बिखण्डनको विषबमन गर्ने पहिलो व्यक्ति प्रचण्ड त्यसपछि नागेन्द्र पासवान, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, जेपी गुप्ता, शरदसिंह भण्डारी र आज सीके ! ♠ चन्द्रमणि गौतम ♠ नेपालमा यतिखेर सीके राउत नामक बिखण्डनको प्रेत घुमिरहेको छ । फागुन २४ गते विवादास्पद ११ बुँदे सहमति गरेको मुसी सुक्न नपाउँदै (दोस्रो दिनमा) जनकपुरमा उनै सीकेको स्वागतार्थ र उपस्थितिमा मधेश बिखण्डनको नारा लगाइयो भने यो पनि ओली–राउत सहमतिअनुरुप नै भएको थियो कि ! यो नारा लागेपछि सीकेले भनेछन्, “म ११ बुँदे सहमतिको बाटोमै हिँडिरहेको छु ।	थप पढ्नुहोस्
सरकार र सीके राउतबीचको सम्झौतालाई के भन्नु हुन्छ ? सरकारले गुपचुपमा वार्ताको तयारी र सम्झौता गरेको छ । यसमा कत्तिको विश्सनियता छ भन्ने कुरा सरकारले जान्दछ । कसैले थाहा पाउला न कि भनेर सरकारले हतारमा आफुले मात्र जस लिन एकदमै ठुलो काम गरेको भान पार्न खोजेको छ र यसमा कसैको हात छैन भनेर सरकारले देखाउने धृष्टता गरेको देखिन्छ । सम्झौता पनि दुई अर्थी छ । यो सम्झौताले विखण्डन रोक्ने दावी सरकारको छ । यसमा देश टुक्राउने मनसाय छैन भनेको छ । उता सीके राउतले भने मधेस टुक्रयाउने एउटा आधार यो सम्झौतापछि बन्यो भनेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
♣ बिक्रमभान्जा योञ्जन ♣ भ्रष्टाचारलाई लिएर गायक पशुपति शर्माले गाएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाईदैन नेपालमै हो छुट......’ गीतले समाजमा ल्याएको तरङ्ग र दुईतिहाई बहुमतको जगमा बनेको सरकारलाई हल्लाएको तातो सेलाएको छैन । भ्रष्टाचार घटेको होइन, नयाँनयाँ अवतार, रुप र संस्करणमा देखा परिरहेका छन् । एकवर्षदेखि चर्किरहेको भ्रष्टाचारको यो मामिलामा रवीन्द्रजीका बारेमा ओलीलाई लागेको हतारो थाहा भएपछि नै यो काण्डमा प्रधानमन्त्रीको नियत ठीक नभएको देखियो । अनि प्रधानमन्त्री जनतालाई भाषण सुनाउँछन्, “म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्नपनि दिन्न...... ।	थप पढ्नुहोस्
♦ चन्द्रमणि गौतम ♦ नेपाली कांग्रेसका संस्थापकमध्येका पछिल्ला नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) को फागुन २० गते पूण्यस्मृति दिवस पर्छ । यो वर्ष उहाँको नवौँ स्मृति दिवस हो । उहाँको निधनकै दिन नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता तथा प्रख्यात उपन्यासकार (बसन्ती, सेतोबाघ जस्ता ऐतिहासिक उपन्यासका लेखक) डायमण्ड शम्शेरको पनि निधन भएको थियो । त्यसकारण किसुनजीको निधनकै दिन डायमण्डजीलाई पनि श्रद्धापूर्वक सम्झने गरौं । यतिबेला किसुनजीको गुणगान गाउने बेला चलिरहेको छ । मानिस मरेपछि उसका बारेमा भए–नभएका गुणको तारिफ गर्ने नेपाली चलन किसुनजीका सन्दर्भमा पनि भइरहेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
वसन्तपुरमा होलीको चीर ...